ठूलो संख्यामा किसानको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा, सोलार प्यानल लगाउने बहानामा किसान मार्दै चिन ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय ठूलो संख्यामा किसानको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा, सोलार प्यानल लगाउने बहानामा किसान मार्दै...
ठूलो संख्यामा किसानको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा, सोलार प्यानल लगाउने बहानामा किसान मार्दै चिन !
काठमाडौं । शीतकालीन ओलम्पिक खेलहरू हरियालीका लागि, विराम चिन्हको क्षेत्रमा चीन सधैं अग्रणी रहेको छ। आगामी वर्ष चीनको बेइजिङमा शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद आयोजना हुँदैछ । शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग हुने पहिलो ओलम्पिक खेलकुद आयोजना गर्न चाहन्छन् । दापुनयाको अगाडि चीन र यी तयारी देखाउँदै छन् ।
खबेई प्रान्तमा प्रहरी र सरकारी अधिकारीहरूले ठूलो संख्यामा किसानको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरेका छन्। चीनमा पुलिस र सरकारी अधिकारीहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको राम्रो काम गर्छन्। वर्षौंदेखि यी किसानहरूले आफ्नो जमिन खेती गरेर पशुपालनका लागि घाँस जुटाउने गर्थे तर ती जग्गा कम्युनिष्ट पार्टीले खोस्यो । विरोध गर्ने जो कोहीलाई कुटपिट, निर्ममतापूर्वक कुटपिट, यातना र बन्धक बनाइयो। फलस्वरूप, अहिले यी किसानहरूको जग्गामा सोलार प्यानलहरू लगाइएका छन्, जसमा यी मानिसहरूले न खेती गर्न सक्छन् न गाईवस्तु चराउन सक्छन्।
चिनियाँ प्रहरी र अधिकारीले खबाइ प्रान्तका किसानसँग सम्पर्क गरेर यी जमिन बाँझो भएकाले खेती गर्न नसकिने भन्दै सो जग्गा सौर्य ऊर्जाका लागि लिइरहेका छौं । तर, यही जग्गामा आसीले काम गरेको र त्यही जग्गामा मकै र जुहारको दाना उब्जाउने किसानले जीविकोपार्जन गुमाएपछि शताब्दीयौंसम्म घरमै राखेको र बाली बेचेर मात्रै अमिनी पाउने किसानको भनाइ छ । खबई प्रान्त नजिकैको बाओडिगाङ र साङ्च्याखाउ सहरका किसानहरूका अनुसार अधिकारीहरूले किसानलाई कुनै पनि जमिन नदिएपछि प्रति एकर जमिन ३ हजार युआन लिने बताएका छन्। सोलार फार्माका लागि किसानको जग्गा पनि जबर्जस्ती जफत गरिएको छ । अब त्यो जग्गा किसान र उनीहरुको पैसा पनि गएको छ । यी सोलार प्यानलका कारण खबई प्रान्तका किसानको जीवन पहिलेभन्दा झनै जोखिमपूर्ण र रमाइलो भएको छ ।
चीनमा मानवअधिकारको कुनै भावना छैन, जहाँ सरकारले आफ्नो आत्मनिर्भरता र नवीनतालाई चीनको राम्रो छवि देखाउन आफ्नो समाजको हितको शोषण गर्छ र उनीहरूले यो खबरलाई अँध्यारोमा राख्छन्। जग्गा कब्जा गरेको बताएपछि उनलाई प्रहरी चौकीमा लगेर कुटपिट गरिएको थियो । यदि होइन भने, उनलाई जेलमा फसाउन भनियो।
नयाँ देखाउन चीनले जमिनको वास्तविकता मात्र उपयोगिता भएकाले सौर्य ऊर्जाका लागि कृषियोग्य जमिन नलिने नियम बनाएको छ । यहाँ जबर्जस्ती जग्गा कब्जा गरिँदैछ र किसानलाई एक पैसा पनि दिइँदैन । कृषकहरू भन्छन्, ‘राष्ट्रिय स्तरमा जग्गा चाहिएमा किसानबाट किन्ने नीति छ किनभने अधिकारीहरू गाउँमा आउँछन्, जग्गा भाडामा दिन्छन् र बाँकी पैसा आफ्नो खल्तीमा भर्छन्, त्यो हो । सरकारको नीति। आफ्नै फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सन् २०१९ मा चीनको कार्बन उत्सर्जन १०.१७ बिलियन ब्यारेलमा पुगेर चीन हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो। चीनले २०३० सम्ममा आफ्नो ऊर्जा उत्पादनको २५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस क्षेत्रले विश्व बजारमा ठूलो हिस्सा लिन चाहन्छ। । ।
चीन आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू पछ्याउन थाकेको छैन, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भनेको छ कि यो लक्ष्य हासिल गर्न चीनले आफ्ना किसानहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो भूमिबाट बेदखल गरेको छ। उनीहरूले आफ्ना जनतालाई सताएका छन्, उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाएका छन्, उनीहरूको जीविकोपार्जनमा लुटपाट गरेका छन् र यी सबै मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई चीनले उजागर गरिरहेको छ। यो कालो सत्य चीनबाट लुकाइयो भने पनि यो वास्तविकता चीनको चम्किला अगाडि कालो धब्बा जस्तै हुनेछ जसबाट उम्कन सकिने छैन ।
Previous articleकम्युनिस्ट सर्बहाराका नेता प्रचण्डको नातिको महगो स्कुल , मासिक ५० हजार खर्च
Next articleचीनको आक्रमणबाट ताइवानलाई जोगाउन अमेरिका र जापान आकस्मिक योजनासहित तयार